အိမ်ဆောက်ရင် သိထားသင့်သော လူသေတဲ့အထိ ဒုက္ခပေးတဲ့ သစ်ဆက်နည်းအကြောင်း – XB Media Myanmar
အိမ်ဆောက်ရင် သိထားသင့်သော လူသေတဲ့အထိ ဒုက္ခပေးတဲ့ သစ်ဆက်နည်းအကြောင်း
အိမ်ဆောက်ရင် သိထားသင့်သော လူသေတဲ့အထိ ဒုက္ခပေးတဲ့ သစ်ဆက်နည်းအကြောင်း
အိမ်တအိမ်မှာ စီးပွားပျက်ပြီး လူသေတဲ့အထိ ဒုက္ခပေးတဲ့ ပင်လယ်ကူးသစ် လို့ခေါ်တဲ့ အကြောင်း အဲ့ဒါ အိမ်တစ်အိမ်မှာ ပင်လယ်ကူးလို့ခေါ်တယ်. . .
အလွန် ခိုက်ပါတယ်…အိုက်အိမ်မှာ နေသူများ စီးပွားမဖြစ်တတ်ဘူး ။ လူသေသည် အထိအောင် ဒုက္ခ ပေးတတ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ သစ်ကို ဆက်တဲ့နေရာဟာ တိုင်ရှိရင် ဆက်လို့ ရပါတယ် ။ တိုင်မရှိပဲ ဆက်ထားရင်တော့ ကျိမ်းသေ ပင်လယ်ကူးအိမ် လို့ခေါ်ပါတယ် ။ ရှိနေခဲ့ရင် ချက်ချင်းသာ ပြင်ဖို့လုပ်လိုက်ပါ။
နောက်…အိမ် ပုခက်လွှဲဆိုတာ ရှိသေးတယ် ခေါင်းရင်း အိမ်နဲ့ ခြေရင်းအိမ် ဟာ အမြင့် တူနေပြီး အလယ်အိမ်က ပုနေရင် အိမ် ပုခက်လွှဲပါ.. ဒီလိုအိမ်မျိုး လည်းပဲ..ခိုက်ပါတယ် ။ မနေသင့်တဲ့ အိမ်မျိုးပါ ။ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြောပြတာပါ ။
နောက်ပြီး ခေါင်းရင်းက ငယ်သူ ခြေရင်းက ကြီးသူနေတဲ့ အိမ်ကြား သွားနေမိရင် ရှိတာ ကုန်ဖို့သာပြင်ထား ။ ကျွန်ပ်ကိုယ်တိုင် ခံခဲ့ရဖူးလို့ အိမ်ထောင်ကျကာစက အိမ်တစ်လုံး ဝယ်လို့ရတဲ့ အခြေနေမျိုးမှာ ရှိတာ အကုန် ကုန်ဖူးပါတယ် ။
နောက်ပြီး လမ်းထောင့်စွန်းက အိမ်သစ်ဆောက်ရင် အိမ်ရှေ့မျက်နှာစာမှာ သစ်သုံးတဲ့ အခါ အဟောင်း တစ်ချောင်း ထည့်သုံးသင့်ပြီး လမ်းအလယ်က အိမ်ဟောင်း ပြင်ရင် မျက်နှာစာမှာ အသစ် တစ်ချောင်း ထည့်ပြီး သုံးရတယ် ဆိုတာကော…သင်သိပါသလား။
အိမျဆောကျရငျ သိထားသငျ့သော လူသတေဲ့အထိ ဒုက်ခပေးတဲ့ သဈဆကျနညျးအကွောငျး
အိမျတအိမျမှာ စီးပှားပကျြပွီး လူသတေဲ့အထိ ဒုက်ခပေးတဲ့ ပငျလယျကူးသဈ လို့ချေါတဲ့ အကွောငျး အဲ့ဒါ အိမျတဈအိမျမှာ ပငျလယျကူးလို့ချေါတယျ. . .
အလှနျ ခိုကျပါတယျ…အိုကျအိမျမှာ နသေူမြား စီးပှားမဖွဈတတျဘူး ။ လူသသေညျ အထိအောငျ ဒုက်ခ ပေးတတျပါတယျ ။ အဲ့ဒီ သဈကို ဆကျတဲ့နရောဟာ တိုငျရှိရငျ ဆကျလို့ ရပါတယျ ။ တိုငျမရှိပဲ ဆကျထားရငျတော့ ကြိမျးသေ ပငျလယျကူးအိမျ လို့ချေါပါတယျ ။ ရှိနခေဲ့ရငျ ခကျြခငျြးသာ ပွငျဖို့လုပျလိုကျပါ။
နောကျ…အိမျ ပုခကျလှဲဆိုတာ ရှိသေးတယျ ခေါငျးရငျး အိမျနဲ့ ခွရေငျးအိမျ ဟာ အမွငျ့ တူနပွေီး အလယျအိမျက ပုနရေငျ အိမျ ပုခကျလှဲပါ.. ဒီလိုအိမျမြိုး လညျးပဲ..ခိုကျပါတယျ ။ မနသေငျ့တဲ့ အိမျမြိုးပါ ။ ဗဟုသုတအနနေဲ့ ပွောပွတာပါ ။
နောကျပွီး ခေါငျးရငျးက ငယျသူ ခွရေငျးက ကွီးသူနတေဲ့ အိမျကွား သှားနမေိရငျ ရှိတာ ကုနျဖို့သာပွငျထား ။ ကြှနျပျကိုယျတိုငျ ခံခဲ့ရဖူးလို့ အိမျထောငျကကြာစက အိမျတဈလုံး ဝယျလို့ရတဲ့ အခွနေမြေိုးမှာ ရှိတာ အကုနျ ကုနျဖူးပါတယျ ။
နောကျပွီး လမျးထောငျ့စှနျးက အိမျသဈဆောကျရငျ အိမျရှမေ့ကျြနှာစာမှာ သဈသုံးတဲ့ အခါ အဟောငျး တဈခြောငျး ထညျ့သုံးသငျ့ပွီး လမျးအလယျက အိမျဟောငျး ပွငျရငျ မကျြနှာစာမှာ အသဈ တဈခြောငျး ထညျ့ပွီး သုံးရတယျ ဆိုတာကော…သငျသိပါသလား။
ဆက်စီဖက်ရှင်တွေဝတ်ပြီး အောင်မြင်နေတဲ့မိခင်အပေါ် သမီးဖြစ်သူရဲ့ သဘောထားကို ပြောပြလာတဲ့ လုလုအောင်
သက်သာခြင်းဆိုတဲ့ ထောင်ခြောက်လေး ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ